लोकप्रियताको उचाईमा राजेश पायल (भिडियोमा पनि हेर्नुस्..) | Emedia Hub UK
Home Entertainment Music लोकप्रियताको उचाईमा राजेश पायल (भिडियोमा पनि हेर्नुस्..)
लोकप्रियताको उचाईमा राजेश पायल (भिडियोमा पनि हेर्नुस्..)
Posted By: Prakash Raion: September 04, 2017 In: Music, Photo News, नेपाल समाचारNo Comments
काठमाडौं – अमेरीकामा सन् २००२ जुन महिनाको ११ देखि सुरुवात भएको अमेरीकन आईडल २००४ मा भारतमा आएर ईण्डियन आईडलको रुपमा संचालन भएको थियो । उक्त अन्तराष्ट्रिय फ्रेंजाइज शो ‘नेपाल आइडल’ नेपालमा पनि भित्रिएको छ ।
तर अफसोच पहिलो पटक नेपालमा भईरहेको अन्तराष्ट्रिय फ्रेंजाइज शो ‘नेपाल आइडल’को विषयमा लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा हुने गरेको छ । केहि चर्चा सकारात्मक भन्दा बढि नकारात्मक र आलोचनात्मक टिप्पणीहरु हुने गरेको पाईन्छ ।
खासगरी नेपाल आइडलका जजहरु अडिसन राउण्ड देखिने आलोचित हुदै आए । एक अन्तर्वार्ताको क्रममा त्यहि बिषयमा गायक राजेश पायलले पनि जजहरुप्रति केहि भनाई पोखेका थिए ।
अन्तत नेपाल आइडल आयोजकले गायक राईलाई अतिथि जजको रुपमा गत हप्ता निम्त्याएको थियो, र शो को सुरुवात नै राइको गायनबाट भएको थियो ।
उनले ‘तिमीलाई रोजे विश्वास गरे, मुटु झिकेर तिमीलाई सुम्पी दिए‘’ बोलको निक्कै मार्मिक गित उनको आफ्नो सैलिमा गाएका थिए ।
जव उनले स्टेजमा गित सुरु गरे उनको आलाप नै करिब ४० सेकेन्ड लामो थियो जुन देखेर दर्शकको होस् उडेको थियो भने अन्य जजहरु हेरेको हेरेइ भएका थिए ।
उनले गाएको त्यो गित युट्युबको ट्रेन्डीङमा परेको थियो । धेरै दर्शकले मन पराएका छन । उनको त्यो गित मात्र हैन उनले प्रतिष्पर्धीहरुलाई दिएको प्रतिक्रिया पनि ट्रेन्डीङमा परेको हो ।
त्यो भन्दा अगाडी अतिथि जजको रुपमा रामकृष्ण ढकाल जादा तारिफ हैन आलोचित हुनु परेको थियो । कारण थियो ढकालले गरेको एकपक्षीय प्रतिक्रिया । तर राजेश पायलमा देखिएन, उनले सबैलाई एकैनासे प्रतिक्रिया दिएका थिए ।, साझा पेजबाट पनि लिईएको हो प्रस्तुत केहि अंश ।
सानो उमेरमै ‘फैलियो माया दुबो सरी’ गित गाएर चर्चा पाए । पछिल्लो समय उनलाई ‘राई इज किङ’ भनेर चिन्ने गरिन्छ ।
चर्चित गायक राजेश पायल राई, नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चर्चित ब्यक्ति मात्र होईन, सर्बाधिक पैसा कमाउने गायक मध्येमा पनि पर्छन् ।
उनको संघर्षको कुरा गर्दा उनलाई यो नाम र दाम भने त्यसै मिलेको हैनन्, करिब २५ वर्ष बढी लागेको छ यो स्थानमा आउन । हाल नेपाली सेलिब्रिटीहरु मध्ये सबै भन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्ने कलाकारमा पर्छन् । कार्यक्रमको शिलशिलाले गर्दा उनको आधा समय करिव आकाशमै बित्छ ।
गायक राईको चर्चा संगै अहिले युट्युबमा ४ ओटा भिडियो ट्रेन्डीङमा पर्यो । जुन एउटा कलाकार एकै चोटी यति धेरै भिडियोको ट्रेन्डीङमा परेको सायद पहिलो घटना होला । उनले नेपाल आईडलमा गाएको गीत र उनले दिएको प्रतिक्रियाको निकै चर्चा भईरहेको छ सामाजिक सञ्जाल र युटुवमा ।
आफ्नो पेजमा राजेश पायल राईले शेयर गरेका तल हेर्नुस्..
‘धन्यबाद यती धेरै माया दिनु भएको मा एकै दिन मा ४ ओटा ट्रेन्डिङ एउटै कलाकार को,सायद इतिहास मै पहिलो होला इतिहास फर्केर हेर्न मन लाग्यो ..जय गित जय संगीत ..
#6 on trending #18 on trending #25 trending #46 on trending’
किन भईहेको छ ‘नेपाल आईडल’को चौतर्फी आलोचना ? आयोजकले दियो फेरि उल्टै धम्की !
‘नेपाल आइडल’ले गर्‍यो निःशुल्क भोटिङको ब्यवस्था